Shiinaha High Transparent Biodegradable POF kulaylka yaraynayso filimka Jumbo duudduuban warshad iyo soo saarayaasha | GS PACK
Heer sare Transparent Biodegradable POF kulaylka filimka Jumbo duub
PVC SHRINK FILM (Polyvinyl Chloride) waa nooca filimmada ugu yaraanaya ee hadda suuqa ka jira. Daabacaadda daabacaadda filimka PCV-ga ah waa nooc ka mid ah qalabka wax lagu duubo ee dhaqaalaha leh oo leh tayo wanaagsan oo si ballaaran loogu adeegsado dhammaan noocyada warshadaha baakadaha, sida cuntada, cabitaanka iyo isticmaalka kale ee maalinlaha ah.
PVC waa filim cufnaan sare leh oo hoos u dhigaya kala duwanaanta heerkulka hoose. Waxyaabaha gacmo-qabsiga ee inta badan loo isticmaalo suuqyada.Waxay leedahay heerar hoos u dhac aad u fiican, caddayn, tayo daabacan, iyo noocyo badan oo heerkulka hoos u dhaca iyo saamiyada hoos u dhacaya. Awoodda saameynta sare leh ee iska caabbinta cimilada dheeraadka ah.
Dhumucdiisuna (um / eeg)
Polyolefin Shrink Film (POF) ayaa hadda ah kan ugu badan ee loo isticmaalo qalabka wax lagu duubo, Waxyaabaha ugu badan ee filimku ka kooban yahay waa Polypropylene (PP) iyo Linear Low DensityPolyethylene (LLDPE).
Qalabkani waa mid aan sun lahayn oo aan urayn nooca deegaanka u habboon (POF) 5-Lakabka Isku-darka ah ee Filimmada Shrink ee ay soo saarto shirkaddeena waxaa lagu muujiyey saamiga ciriiriga sare (in ka badan 60%), hantida xannibaadda hawada ee dhexdhexaadka ah, adkeysiga dabacsan iyo hermetic daboolida hantida, iska caabinta heerkulka hooseeya, aan jilicsaneyn, qoyaan-caddeyn iyo anti-static.It waxay ku habboon tahay mashiinnada baakadka ee iskudhafka otomaatiga ah ama semi-otomaatigga ah.
Astaamaha ugu muhiimsan ee filimka baakadaha POF:
1. Heerka ka yaraanshaha: dhanka kale 20% - 30%, jidadka dhaadheer 65% - 75%.
2. dhalaalaya sare, hufnaan sare, Perfact Qurxinta waxqabadka.
3. Waxqabadka debecsan waa wanaagsan yahay, wax ku habboon yahay heerkulka hooseeya, Ma fududaan gabow.
4. Cufnaanta hoose ee POF Shrink Film waxay si wax ku ool ah u yareyn kartaa qiimaha baakadka.
5. Waxqabadka qufulka kuleylka waa mid aad u fiican, daboolid heer sare ah.
6. Qalafsanaan, adkeysi waxqabad wanaagsan.
7. Isticmaal baaxad, waxay u isticmaali kartaa nus-otomaatiga, qalabka baakadaha xawaaraha sare leh iyo baakadaha gacanta.
Hore: Custom 10-35 microns pof termoono caag ah jawi-saaxiibtinimo filim duub duuban
Waxyaabaha Filimka ah ee kuleylka ah
Iskudhin Duubista Filimada, Yaree Filimka PCv, Polyolefin Iskudhin Heerkulka, Polyolefin Pof Shrink Film, Duubista Polyolefin Pof, Kala Bixinta Filimka Vs Duubista,